समृद्धिको पर्खाइमा रुवीभ्याली « प्रशासन
समृद्धिको पर्खाइमा रुवीभ्याली
प्रकाशित मिति : 1 June, 2020 11:46 am
नेपाल सरकारको २५ वर्षे दीर्घकालीन सोचमा देशलाई ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने घोषणासँगै ७५३ वटै स्थानीय तहले यसै अनुरूप नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने क्रममा रहेका छन् । विगतमा अनुभव नभएको अधिकांश स्थानीय तहहरूको हैसियतलाई केन्द्रमा राखेर तुलोमा जोख्ने काम पनि नभइरहेको होइन तर ‘खुकुरीको चोट अचानोलाई मात्र थाहा हुन्छ’ भनेझैँ वास्तविकता बुझ्न ३६५ दिन, आवधिक योजना र दीर्घकालीन योजनानै कुर्नै पर्दैन ।
रुवीभ्याली गाउँपालिकाको विकास र समृद्धि विना के बाग्मती प्रदेशले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सफल भएको दाबी गर्न सक्लान् ? धादिङ जिल्लाले समृद्धि र विकासको श्वास फेर्न सक्लान् ? के नेपाल राज्यले खुसी नेपालीको घोषणा गर्न सकिन्छ होला ? हुन त ‘नजिकको तीर्थ हेला’ भने झैँ अनेक सम्भावना बोकेको रुवीभ्याली गाउँपालिका पछि परेको भन्दा पनि पछि पारिएको हो भन्ने वास्तविकता रुवीभ्यालीमा पाइला टेक्ने जो सुकैले व्यक्त गर्न सक्दछ । देशको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपनालाई टाढाबाट हेरिरहने, ‘मनको बह कसैलाई नकह’ भनेझैँ तिब्बतसँग टाँसिएर गणेश हिमालको काखमा लुकेर बसिरहेको र काठमाडौँ र धादिङबेशींका चिल्ला मोटर बाटोसँग सम्बन्ध जोड्न खोजे पनि कसैले सम्बन्ध विच्छेद नै गराएको जस्तो तर अथाह सम्भावना बोकेको, विगतमा अरूबाट समेत आशा जगाइ छाडेको अवशेषहरू देखिने विकास र समृद्धिको पर्खाइमा रहेको एउटा भूगोलको बिल्ला भिराइ टाढा र दुर्गम पारिएको एक स्थानीय तह हो रुवीभ्याली गाउँपालिका ।
धादिङबेशीको पुच्छार बजारबाट गाउँ लाग्ने सिमानामा एउटा बोर्ड देख्न सकिन्छ । त्यसमा लेखिएको छः साङ्कोष-तिप्लीङ सडक १०३ कि.मि. । यो सडकको वि.सं. २०६३ अघिनै नामाकरण भएको थियो । यद्यपि यसको डिपिआर भएको २-३ वर्ष जति मात्र भयो । सडक विभागले यो कामको टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएको हो । तिप्लीङ रुवीभ्याली गाउँपालिकाको साबिक गा.वि.स. र हाल १ र २ नं वडा मा फैलिएको वडा हो । २९ किमि धुलो र हिलो बाटोको यात्रा पछि नेत्रवती डबजोङ गा.पा. को लपाङ फेदी भन्ने स्थान अवस्थित छ । उक्त स्थानमा पुल नभएकोले खोला तर्नुको विकल्प छैन । हाल उक्त स्थानमा पुल निर्माणको काम सुरु भएको छ । एक पटक २०७६ कार्तिक महिना तिर नेपाल टिभीमा त्यहाँको समस्याकोबारे समाचार प्रसारण पनि भएको थियो त्यो त्यहिँ स्थान हो । करिब ७-८ किमि पर डुन्डुरे खोला रहेको छ । हाल उक्त स्थानमा पक्की पुल निर्माण हुने क्रममा रहेको छ । उक्त पुल कोदारी तातोपानीको भोटेकोशी माथिको मितेरी पुल जस्तै हो । उक्त डुन्डुरे पुल पारिको जीवन कष्टकर मात्र होइन उक्त पुल पारी हेर्दा त्यसतर्फको भूगोलनै कहाली लाग्दो देखिन्छ नै । साँच्चै जो कोहीको खुट्टा काँप्ने र मनमा डर लाग्ने हुन्छ। उक्त पुलले खनियाबास गाउँपालिकाको पेर्चौ, झार्लाङ लगायतका गाउँबस्तीहरु र सिङ्गो रुवीभ्याली गाउँपालिकालाई जोड्छ तर हाल उक्त पूल निर्माण गर्न थालेको समेत महिनौँ भइसक्यो । खनियाबास रुवीभ्यालीका करिब १५ हजार मानिस दैनिक आवात जावतका लागि सास्ती भोगिरहेका छन् । बोराङ गाउँ गाउँपालिकाको सिमाना वडा नं. ४ मा गाउँ हो । बोराङ पूर्व गृहमन्त्री बुद्दीमान तामाङको गृह बस्ती पनि हो । बोराङबाट साबिक लापा गाविस, सेर्तुङ र तिप्लीङ पुग्न सकिन्छ । पछिल्लो पटक बोराङ-धादिङबेशी-काठमाण्डौ बलेरो जीप सेवा पनि सञ्चालन गरेको थियो, तर त्यो खहरे खोला जस्तै भयो किनभने बोराङदेखि डुन्डुरे-किन्ताङफेदी र लपाङफेदीको खोला तर्नुनै महाभारत हुन्छ ! विशेषत: वर्षा महिना र पानी पर्ने बेला । हाल प्रदेश तथा गाउँपालिकाको बजेटबाट बोराङ-लापा-खादिङ खण्डको सडक ट्र्याक खन्ने कार्य भइरहेको छ ।
त्यसैगरी बोराङ -सेर्तुङ खण्डको ट्र्याक निर्माण कार्य पनि अघि बढिरहेको छ । पछिल्लो पटक गाउँपालिकाले रिङरोड अवधारणामा कूल १०९ किमि को सडक डिपिआर समेत तयार गरिसकेकोले सडक ट्रयाक खन्ने काम धमाधम भइरहेको छ । गोरखा जिल्लाको आरुघाट गाउँपालिकासँग पनि निकट भविष्यमा सडक ट्याकले जोडिदैछ । यसले लापा, खादिङ र कपुर गाउँसम्मका लागि सहजता हुनेछ । यद्यपि भूगोल, सदरमुकामबाट टाढा र अन्य असमझदारीका कारण चुस्त रूपमा कार्य भने हुन सकिरहेको छैन । डुन्डुरेदेखि करिब २२-२४ कि.मि. को बाटोको पुरानो सडक ट्र्याक पनि त्यति राम्रो छैन । चारपाङ्ग्रे गाडी पनि मुस्किलले पेर्चोदेखि बोराङसम्म जान सकिन्छ । माहिर चालकले मात्र गाडी र मोटरसाइकल चलाउन सक्छन् उक्त सडकमा । गाउँपालिकाको प्राविधिकको भनाइ अनुसार तयार भएको सडक ट्र्याक समेत धेरै स्थानमा त्रुटिपूर्ण छ । कतै मोड पुगिँदैन, कतै निकै ठाडो त कतै निकै साँघुरो छन् सडक ।
करिब १५-२० कि.मि. सडकमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्दा भगवानको नाम जपेरनै हिँड्नु पर्छ । यसका अलावा आधा दर्जन जतिको खोल्सा, खोलाले त झनै जोखिम बनाइदिएको छ ! सडक । रुवीभ्याली गाउँपालिकासम्म मात्र पुग्ने बाटोको यात्र एक मिसननै हुन्छ । “वन मिस्टेक गेम ओभर” भनेझैँ हल्का गल्तीले ज्यान जाने पक्का छ ! गाउँपालिका पुग्ने सडकको यात्रामा ।
रुवीभ्यालीको फरक पाटो बौद्ध धर्मावलम्बी सँगै कृस्चियन धर्मवलम्वीहरु पनि रहनु हो । यस बाहेक तामाङ समुदायमा प्रचलित लोकभाका म्हेन्दोमाया र दोरादेखि घोडा नाच, लामा नाच, झाँक्री नाचले धनी छ गाउँपालिका । पाहुना स्वागत सत्कारमा यी नृत्यहरू देखाउने परम्परा छ । म्हाने र तान्त्रिक महांकाल जात्रादेखि गुरुङ समुदायको घाटु नाच पनि प्रचलित छ रुवीभ्यालीमा ।
साबिकका तीन गाविस (लापा, तिप्लिङ र सेर्तुङ) मिलेर बनेको रुवीभ्याली गाउँपालिकामा सडक पूर्वाधार, धर्म संस्कृतिको सम्भावनाको चर्चासँगै अन्य क्षेत्रको सम्भावनालाई बिर्सन सकिँदैन । पछिल्लो जनगणना अनुसार रुवीभ्याली गा.पा.को कुल जनसङ्ख्या ९ हजार ५६५ छ । अहिले यो बढेर करिब १२ हजारको हाराहारीमा पुगेको छ । यो पालिका ४ सय १ वर्ग किलोमिटरमा भूगोलमा फैलिएको छ । यस गाउँपालिकामा ६ वटा वडा छन् । धादिङको सदरमुकामबाट यो गाउँपालिकाको सिमाना ५४ किमि र केन्द्र रहेको सेर्तुङ करिब ६४ कि.मि. छ ।
विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा वडा नं. ४ मा अवस्थित चालिस गाउँलाई नयाँ गन्तव्य घोषणा गरिएसँगै देश तथा विश्वले यस गाउँपालिकालाई बिर्सन सक्ने कुरै भएन । गणेश हिमालको ट्रेकिङ रुट पनि यहीँ पर्दछ । कस्तुरी, रेडपाण्डा र डाँफे लगायत विभिन्न लोपोन्मुख जीवजन्तुहरू यस पालिकामा देख्न पाइन्छ । गणेश हिमाल पर्यटन विकास समितिले गरेको कामको सराहना गर्नै पर्छ यस कार्यको लागि । त्यसै गरी विश्व मानै दुर्लभ बहुमूल्य खनिज रुवी यस पालिकामा प्रशस्त मात्रामा पाउन सकिन्छ । यद्यपि सङ्घीय सरकारले अविलम्ब स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरी भौगोलिक सर्भे गरी सर्वसाधारणको लागि प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नु पर्दछ जुन काममा खासै चासो चर्चा सुनिँदैन । रुवी मात्र नभएर यहाँ सिसाखानी तथा फलामखानी पनि भएकोले यसतर्फ सरकारले समयमै ध्यान दिनु जरुरी छ । गाउँपालिकाको बिच भाग र जिल्लाको पनि लगभग बिच भागमा अविरल बग्ने आंखु को सौन्दर्यताले जोसुकैको मन लोभ्याउँदछ । पालिकाभरि कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा दर्ता भएका ७ वटा माइक्रो हाइड्रोहरू सञ्चालित छन् । यद्यपि त्यहाँ उत्पादन भएको विद्युत् कार्यालय मैत्री भने देखिँदैन। बेलुकी ५ बजे देखि बिहान ७ बजेसम्म मात्र आपूर्ति हुन्छ अधिकांश स्थानमा। गाउँपालिका कार्यालय, ६ वटा वडा कार्यालय, ३ वटा स्वास्थ्य चौकी, ६ वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईहरू, ४ वटा माध्यमिक विद्यालय लगायत अन्य कलकारखाना र लघु उद्योगहरू सञ्चालनका लागि केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विकल्प छैन । हाल केन्द्रीय प्रसारण लाइनसँग जोडिन बिजुलीका खम्बाहरू ल्याउने काम भने भइरहेको छ । साथै करिब २०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको जलविद्युत् आयोजना वडा नं. ४ मा अवस्थित बोराङ गाउँमा निर्माणको चरणमा रहेको छ ।
तर विडम्बना रुवीभ्याली गाउँपालिकाको ९० % भूभाग सडक संजाले जोडिएको छैन । लापा, खादिङ, कपुरगाउँ, लिङ्चो, सेर्तुङ, चालिस, हिन्दुङ, पुरु, रिचेत, लाप्चेत, कुप्चेत, चपाङ्चेत, तेङ्चेत गाउँ बस्तीहरु गोरेटो बाटोमै चलिरहेका छन् वर्षौँदेखि । नेपाल जेसस सोसाइटिको पहलमा स्योमदाङ -पाङसाङ पास- तिप्लीङ सम्मको करिब २७ किमि बाटो सडक ट्र्याक निर्माण गरेको छ । यो बाटो तिप्लीङबासीले निकै मिहेनत गरेर तयार गरेको बाटो हो। यद्यपि यो कच्ची मोटर बाटो मङ्सिर-पुष देखि चैत्र अन्तिम सातासम्म पनि हिउँले अबरुद्द हुन्छ जसले तिप्लीङ लगायत लब्दुङ, पुरु र लिङ्जो गाउँ सडकबाट सम्पर्क विच्छेद हुन्छ । पछिल्लो पटकको सर्भे अनुसार सेर्तुङ लगायत रुवीभ्यालीलाई सबै भन्दा नजिकबाट सङ्घीय राजधानी काठमाण्डौं जोड्ने सडक खण्ड सेर्तुङ-मचेत-सिङ्ला-किस्पाङ सडक खण्ड हो । यो सडक ट्र्याक निर्माणको लागि गाउँपालिकाले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ भने सङ्घ र प्रदेशबाट पनि आवश्यक पहल हुनु जरुरी छ ।
करिब ३४ कि.मि. मा नै नुवाकोट जिल्लाको किस्पाङ गाउँपालिकासँग जोड्ने भएको ले तुलनात्मक हिसाबमा यो सडक खर्चिलो भइकन पनि सामरिक दृष्टिकोणले गाउँपालिकाको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र हुनेछ ।
यसले स्थानीय, पर्यटक, व्यापारी, कर्मचारी लगायत सबैलाई सबै भन्दा नजिकबाट र सहजढंगबाट बजार र राजमार्गसँग जोड्ने छ ।
राजनीतिक क्षेत्रमा कम अनुभव भए पनि गाउँको विकास निर्माणमा सधैँ चासो र चिन्ता लिने जनप्रतिनिधिहरूको टिम छ गाउँपालिकामा । यद्यपि जनप्रतिनिधिहरूको अध्ययन तथा पहल कदमी भने प्रभावकारी देखिँदैन । सैद्धान्तिक निर्णय र सहमति, समझदारी बाहेक जिल्ला, प्रदेश र सङ्घमा धाउने, लबिङ गर्ने, दबाब सृजना गर्ने जनप्रतिनिधिहरू र राजनीतिक दलहरू हातको औलामा गन्न सकिन्छ । विगतमा अधिकांशको बोलिमा कर्मचारी अभावको नारा लागेता पनि पछिल्लो पटकको लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा प्राविधिक- अप्राविधिक गरी स्थायी २७ जना कर्मचारी विभिन्न जिम्मेवारीमा नियुक्ति लिई गाउँपालिकामा पदस्थापन भइसकेका छन् ।
अबको चुनौती भनेको कर्मचारीलाई टिकाइराख्नु हो, उनीहरूलाई आवश्यक तालिम र क्षमता विकास गर्नु हो, कर्मचारी आवासको व्यवस्था गर्नु हो, सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु हो, दबाब , प्रभाव र अभाव रहित वातावरणमा कार्य गराउनु हो र कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्ने वातावरण तयार गर्नु हो ।
आफ्नै प्रशासनिक भवन बनी नसकेको अवस्था , मापदण्ड बिना तयार भएको वडा कार्यालयहरूमा सेवा प्रवाह गर्नु अबका आउने चुनौतीहरू हुन ।
गाउँपालिकाको मानव श्रोत विकास र व्यवस्थापनको पाटो पनि सोचनीय छ । गाउँपालिकामा ४ वटा मावि स्कुलहरू रहेका । पछिल्लो तथ्याङ्कमा करिब आधा दर्जन जनाले मात्र स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका छन् यस पालिका बाट । यहाँ कुनै प्राविधिक विद्यालयहरू अहिलेसम्म बनेका छैनन् । दरबन्दी धेरै कम छन् र पालिकाको अनुदानमा विद्यालयहरू सञ्चालित छन्। स्थानीय तथ्याङ्क अनुसार सम्पन्न परिवारका अधिकांश घरको बालबालिकाहरू धादिङबेशी र काठमाण्डौंका महँगा निजी विद्यालयहरूमा पढाइरहेका छन् । ६ वटा वडामा २१ वटा विद्यालयहरू रहेका छन् । रुवीभ्याली शैक्षिक स्थितिमा पनि कमजोर नै रहेको छ भन्दा फरक नपर्ला । निर्वाचित ३४ जना जनप्रतिनिधिहरू मध्ये धेरै कम मात्र साक्षर र शिक्षित छन् । विविध कारणले योग्यता र क्षमता भएका राम्रा शिक्षकहरू यहाँ आउन सकिरहेका छैनन् ।
गाउँपालिकाका पढेलेखेका युवाहरू अधिकांश काठमाडौँमा बसोबास गर्छन् । १०/१५ हजारको जागिरका लागि कसैले पनि जोखिम मोल्न नचाहेको देखिन्छ, विगतको अनुभवहरू हेर्दा र सुन्दा । कमजोर शिक्षकहरू मात्रै यहाँ पाइने भएकाले शैक्षिक स्थिति कमजोर बन्न पुगेको हो कि भन्ने पनि केही नीति निर्मताहरुको ठम्याइ छ, यद्यपि यो कुरमा पूर्ण रूपमा सहमत भने हुन सकिँदैन ।
शिक्षामा लगानीसँगै त्यसको कडाइका साथ मूल्याङ्कन र जाँच हुनुपर्छ जुन रुवीभ्याली गाउँपालिकाले छिट्टै सुधार गर्नु पर्ने विषय हो ।
सङ्घसंस्था र विभिन्न तहका सरकारको अनुदान र सहयोग बर्सेनि तथ्याङ्कमा पढ्न र देख्न सकिन्छ। सडकसँग गाउँपालिका नजोडिएसम्म राम्रा शिक्षकहरू त्यहाँ आउन चाहँदैनन् भन्ने एक वर्ग छन् । हुन पनि कमसेकम सडक भइदियो भने जाने आउनेको त मनमा अनेक कुरा त खेल्नु पर्दैन । पछिल्लो २-३ वर्षको एस.इ.इ.को नतिजा हेर्दा निकै निराशाजनक देखिन्छ । केही मा.वि. मा विज्ञान र अङ्ग्रेजी विषयका शिक्षकहरू महिनौँ भइसक्दा पनि पूर्ति भएको छैन भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ । यसको पछाडि फर्केर हेर्दा जनप्रतिनिधि, समुदाय, प्र.अ. र अभिभावक-विद्यार्थीहरुको समेत कमी कमजोरी देखिन्छ । यस क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारमा जानेको सङ्ख्या समेत उल्लेख्य छ । पछिल्लो जनगणनामा यहाँ २३०० घरपरिवार छन् भने प्रत्येक घरको १ जना विदेशिएको देखिन्छ औषतमा ।
अन्तमा जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भनेझैँ रुवीभ्याली गाउँपालिकाका सबै जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, स्थानीय वर्ग, नागरिक समाज, राजनीतिक दल सहित बागमती प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले न्यूनतम पूर्वाधारको व्यवस्थापनमा यस पालिकालाई आर्थिक, प्राविधिक र अन्य सहयोग गरेको खण्डमा रुवीभ्यालीले दशकौँ पहिले देखि कुरिरहेको समृद्दी र विकासलाई छिट्टै प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, रुवीभ्याली गाउँपालिका धादिङ।
Tags : रुवीभ्याली